Kaviri mativi Kubata Magnet vagadziri uye vanotengesa | Horizon
Kubva pane zvairi uye mashandiro ayo, magineti ane mativi maviri anonziwo maviri mativi ane simba Neodymium salvage hove magineti ekuvhima pfuma. Iyo inyowani yemagineti sisitimu inogadzirwa kubva kune yakasimba simba isingawanzo pasi pasi Neodymium magineti, simbi kesi uye yakakosha eye bolts. Iyo yakasarudzika dhizaini inoita irinyore diki mbiri mativi ehove magineti kuti ibudise yakasimba yakasimba simba kuve yakafara application senge magineti kuredza, kurembera, kusimudza uye kutora zvimwe zvakasiyana zvesimbi-zvine zvinyorwa.
Zvimiro zveMaviri Magineti Akatsigira
1. Inochinjika simbi isina tsvina eyebolt: Iyi dhizaini inogonesa vashandisi kushandisa hoko dzavo dzakasarudzika pane kusangana neshanduro yavo yakakosha.
2. Kusunga kwepamusoro pakati peyeyebhu uye magineti ekuredza hove: Ringi yekuchengetedza inoderedza njodzi yekutsigirwa neziso kubva uye kurasikirwa nemagineti ekuredza.
3. Mativi maviri anokwezva: Iyi dhizaini inowedzera nzvimbo neine simba remagineti, rinozoita iro rakaenzana magineti ekuredza mativi akaenzana riwedzere mukana wekuvhima hupfumi zvinobudirira.
Maitiro Ekugadzira Akaita mativi Magineti
1. R & D uye simulation: Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, isu tinofanirwa kupinda muR & D uye simulation maitiro, kuti uwane zvakadzama zvinodiwa zvemagineti zvinosanganisira magineti zvinhu, chimiro, saizi, kupfeka uye giredhi, simbi kesi zvinhu uye saizi inowirirana, iyo nzira yekuunganidza zvinhu, nezvimwewo Uyezve sampling inodikanwa kupedzisa dhizaini.
2. Kugadzira Neodymium magineti: Panguva yemagineti block maitiro, iyo magineti kuumbwa uye yekugadzira tekinoroji inofanirwa kudzorwa zvakanyatso, izvo zvinoda kusarudza simba rekubata uye mhando yemaviri mativi ehove magineti. Dzimwe nguva, iro magineti giredhi rinofanira kuve rakakwirira kwete repazasi giredhi seN35, saka kuti usvike inodiwa yepamusoro simba uye diki saizi.
3. Kusarudza simbi simbi uye machining simbi kesi: Izvo zvinhu zvesimbi kesi zvakare zvakakosha kukanganisa dhonza simba, nekuti iyo simbi kesi inofanirwa kubatsira iro remagineti simba reshoma pasi NdFeB magineti akaiswa kune epakati chete. Uyezve, iyo simbi kesi yaigona kudzivirira iyo NdFeB zvachose magineti kubva kutsemuka uye kutsemuka. Iyo kesi yezvinhu yakaderera kabhoni simbi.
4. Kuzadza epoxy nhema: Mukaha uri pakati peNdFeB magineti uye kesi yesimbi yakazadzwa ne epoxy nhema, iyo inogona kugadzirisa Neodymium magineti pane yesimbi kesi, uye wozodzivirira disc Neodymium magineti kubva kuwira pasi uyezve kuwedzera nguva yaro yebasa.
1. Mhando yepamusoro: NdFeB magineti, chinhu chakakosha kwazvo chinogadzirwa nefekitori yedu, inoita kuti tikwanise kuita mhando yemagineti iri pasi pesimba.
2. Mari inoshanda: Kugadzira-mumba inogonesa magineti edu nehunhu hwakaenzana asi nemutengo wakaderera uchienzaniswa nevanokwikwidza.
3.Kurumidza kuendesa: Mazhinji semi akapedzwa zvigadzirwa mudura uye Imba-yekugadzira kugona inogonesa ingori-mu-nguva kuendesa magineti ekuredza.
4. Dzimwe sarudzo: Dzimwe sarudzo dzakajairika dziripo. Zvakare, yedu yemumba yekugadzira uye yekugadzira inogonesa yakagadziriswa sarudzo yemagineti masisitimu evatengi zviri nyore. Tinogona kusangana yakapusa imwechete-yekumira kutenga.
Tekinoroji Dhata yeDhiviri Akatsigira Magnet
Chikamu Nhamba D H M Simba Net Kurema Kunonyanyisa Uchishandisa Tembiricha
Pashure: Neodymium Chiteshi Magineti
Zvadaro: Single mativi Fishing Magineti